Dowladda Kenya oo waraaqaha qaxootinimo kala laabatay Kooxda Fanaaniinta Waayaha cusub – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
MAREEG 14 October 2014 20 October 2014
Mareeg.com-Dowladda Kenya ayaa kala laabatay waraaqaha qaxootinimo Kooxda Fanaaniinta Waayaha cusub oo 10-kii sano ee u dambeeyay ku sugnaa magaalada Nairobi, iyadoo tallaabadaas ay sababtay in qaar ka mid ah fanaaniinta kooxdaas oo bandhig faneed u aaday Holland inay magangalyo weydiistaan.
Fali Cabdi Maxamuud oo ka mid ah Fanaaniinta Kooxda Waayaha cusub ayaa sheegtay in markii ay ka soo dhoofayeen garoonka diyaaradaha Joma Kenyatta, kuna soo wajahnaayeen dalka Holland ay kala kulmeen dowladda Kenya hanjabaad ah in waraaqaha qaxootinimo kala laabanayaan, isla markaana dib loogu celinayo magaalada Muqdisho.
“Holland waxaa u soo aadnay todobaad bandhig faneed Nabada ku saabsanaa, markii aan ka soo baxeynay Nairobi ayaa dowladda nagu wargelisay inay kala laaban doonaan waraaqaha qaxootinimo, dibna loogu celinayo Muqdisho, taasna waa wax aan aad uga soo horjeedno”ayay tiri Falis Cabdi Maxamuud oo wareysi siisay BBC-da iyadoo ku sugan dalka Holland.
Falis ayaa sheegtay in iyada iyo caruur ay dhashay oo ku sugan Kenya ay kala xayiran yihiin, isla markaana ay walaasheed iyo hooyadeed u hayaa, sidoo kalena Gudoomiyaha Kooxda Waayaha Cusub Shiine oo ay seygeeda uu isna ay kala maqan yihiin, si taa la mid ahna loogu wargeliyay in waraaqaha qaxootinimo lagala laabanayo, markii uu dalka Ingiriiska aadayay.
“Kooxda Fanaaniinta Waayaha cusub ayaa ah koox dhalinyaro oo isu tagtay, kuwaasoo fadhigooda ahaa dalka Ke
“Anaga oo lix fanaaniin ah ayaa hada waxaa ku suganahay Holland, dowladda ayaa weydiisanay magangalyo, ayaga ayaana ka sugeynaa”ayay tiri Falis Cabdi Maxamuud oo intaa ku dartay in hadii xataa ay Muqdisho lagu celiyo xaaladooda amni ay qatar galeyso.
Kooxda Fanaaniinta Waayaha cusub ayaa horay uga qeyb galay tartan faneed ka dhacayay dalalka dibadiisa, waxaana kooxdan ay soo shaac baxeen muddo haatan laga joogo 10-sano, iyagoo soo qaadi jira heeso isugu jira wacyi gelin, wadani, jaceyl iyo kuwa kale, waa koox dhalinyaro ah oo fadhigooda ahaa dalka Kenya.
Lama oga in go’aankan Kenya ku gaartay inay waraaqaha qaxootinimo kala laabaneyso uu daba joogo raaf ay horay dowladda Kenya ugu sameysay Soomaali badan oo ku sugnaa Islii, dibna loogu soo celiyay Soomaaliya.
Akhri: Gowrac ka dhacay gudaha masjid ku yaalla Muqdisho